China XL-21 pasi-mhando yakaderera magetsi simba kugovera switchgear vagadziri uye vanotengesa | Nady
XL-21 pasi-mhando yakaderera magetsi magetsi ekuparadzira switchgear
Semagetsi magetsi system ine AC 50Hz-60Hz, yakatarwa kushanda voltage 380-400V, yakatarwa kushanda pari zvino kusvika 630A, uye kutyora chinzvimbo kusvika 15kA,
It inopa kushandurwa kwesimba, kugovera uye kudzora kwemidziyo yekugovera magetsi senge magetsi, magetsi uye mafeni Inogona kupa zvakawandisa, pfupi dunhu uye leakage dziviriro.
It ine 2 Mbiri yekumisikidza chimiro: Indoor bhokisi chimiro (dziviriro giredhi IP30), Kunze bhokisi chimiro (dziviriro giredhi IP65) .Easy kuisa, mari uye inoshanda
It inokodzera vashandisi vemasimba senge magetsi emagetsi, zvinotsiviwa, mabhizimusi uye emigodhi emakambani, uye migwagwa yemigwagwa mikuru.
Mamiriro ebasa eiyo XL yakaderera-voltage yekuparadzira bhokisi
Akajairwa mamiriro ebasa re switchgear seinotevera:
Maximum + 40 ° C
Kunonyanyisa 24 awa yepakati + 35 ° C
Minimum (zvinoenderana nemaminitsi gumi nemashanu epamba) -50 ° C
Mazuva ese avhareji hama humidity asingasviki 90% mukati memukati (kunze kupfuura 50%)
Mwedzi pamwedzi paavhareji hama humidity asingasviki 90% mukati memukati (kunze kupfuura 50%)
Kudengenyeka kwenyika kwakasimba isingasviki 8 degree
Kureba pamusoro pegungwa isingasviki 2000m
mafungiro emidziyo ine pamusoro wepamusoro haifaniri kudarika 5 °
Ichi chigadzirwa hachifanirwe kushandiswa pasi pemamiriro emoto, kuputika, kudengenyeka kwenyika uye makemikari ngura mamiriro.
Yakarongwa kushanda kwemagetsi (V)
Rated kuputira voltage (V)
Rated maitikiro (Hz)
Horizontal bhazi rakatarwa ikozvino (A)
Bhazi hombe rakatarwa-pfupi-nguva kumira zvino
Bhazi rakatarwa nenhamba kumira zvino
Bhazi Matatu-chikamu mana-waya system
Matatu-chikamu shanu-waya system
IP giredhi shandisa mumba
Divi (600 ~ 1000) × 370 (470) × (1600 ~ 2000) mm
1.Indoor bhokisi chimiro (dziviriro giredhi IP30)
• Iyo yekugovera bhokisi furemu inogadzirwa neinotonhora-yakakungurutswa simbi simbi nekukotama uye kuwaya (Kutsigira kwetsika).
• Mushure mekumwaya mushonga, ine yakanaka anti-corrosion performance.
• matanda ekuisa emukati uye emabhodhi ekumisikidza akagadzirwa nealuminium-zinc yakaputirwa kana kutonhorwa-simbi mahwendefa esimbi ekusimbisa passivation.
• Yega-yakatenderedzwa furo glue yakasungirirwa kumucheto wemukati wemusuwo kudzivirira yakanangana yakanangana pakati pemusuwo nemutumbi webhokisi, uye zvakare kugadzirisa nhanho yekudzivirira yemusuwo.
• Zvese zviri zviviri ndiro yepasi uye ndiro yepamusoro yebhokisi inogona kuchengeterwa maburi ekugogodza tambo kuti iite nyore kupinda netambo nekubuda.
• Rutivi runogona kuve nemidziyo yekupisa kupisa kana yakavhurika kupisa kupisa mawindo zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi kugovera gasi remukati uye hunyoro.
• Iyo kabati inogona kuiswa pasi, madziro kana yakadzamidzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.
• Musuwo unogona kuvhurwa nemusuwo mumwe chete kana musuwo miviri kuitira nyore kugadzirisa uye kuisa.
2. Kunze bhokisi chimiro (dziviriro giredhi IP65)
• Iyo yekugovera bhokisi furemu inogadzirwa nesimbi dzesimbi mahwendefa nekukotama uye kuwaya (Kutsigira kwetsika).
• Mushure mekushambadzira kwekunze, ine yakanaka anti-corrosion performance.
• Kana paine zvikamu zvechipiri pane iyo pani, dhizaini yemusuwo inogamuchirwa. Mukova wekunze musuwo wegirazi, uye zvechipiri zvikamu zvakaiswa pamusuwo wemukati.Mamiriro ekushanda kwemidziyo anogona kucherechedzwa pasina kuvhura gonhi rekunze. Tambo dzekugogodza-maburi dzakachengeterwa pazasi pebhokisi kufambisa tambo kupinda uye kubuda.
• Rutivi runogona kuve nemidziyo yekupisa kupisa kana yakavhurika kupisa kupisa mawindo zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.
• Pamusoro panogadzirwa nevhavha inonaya mvura-chiratidzo, uye chikamu chepamberi chepasi chevhavha yepamusoro chine buri rekupisa kupisa mweya wegasi uye hunyoro.
• Bhokisi rekuparadzira rakadzika-pasi rakagadzirwa nemitanda yekusimudza panzvimbo dzakakodzera kumusoro uye mativi ese kumashure kwebhokisi rekusimudza uye kumisikidza. Iyo yepasi ndiro yemutumbi webhokisi yakagadzirirwa maburi anokwira kana mahwendefa etsoka kumativi ese ebhokisi pasi akaiswa pasi.
• Iyo yekumadziro-yakamisikidzwa bhokisi rekugovera rakagadzirwa nekusimudza makumbo pazasi kwekumashure kumusoro kwebhokisi uye panzvimbo dzakakodzera kumativi ese maviri ekusimudza uye kumisikidza.
3. Bhazi-bhawa system
• Iyo huru bhazi-bhawa inotsigirwa nekuisa insulating zvitsigiso.
• Rutsigiro rwekudzivirira rwakagadzirwa ne-yakasimba-simba, yakakwira-murazvo inodzora PPO alloy zvinhu, ine yakakwira yekuisa simba simba uye yakanaka yekuzvidzimisa kuita.
• Bhokisi rakagadzirwa neyakavanzika PE inodzivirira pasi system uye N kwazvakarerekera conductor. Iyo isina kwazvakarerekera bhazi uye inodzivirira yekumisikidza bhazi bar yakaiswa mune yakafanana muchikamu chezasi chebhokisi, uye kune maburi pane iyo PE neN mitsara. Iyo inodzivirira pasi kana tambo dzisina kwadzakarerekera dzedunhu rega rega dzinogona kubatanidzwa padyo Kana iyo N waya uye PE waya yakaparadzaniswa neyakagadzika, iyo N waya uye PE waya zvinoshandiswa zvakasiyana. Kana iri nhanho-nhatu-tambo ina-tambo sisitimu, iyo yekusarerekera bhazi uye inodzivirira yekumisikidza bhazi vanogovana imwechete bhazi (PEN mutsara).
4. Inodzivirira grounding system
Kuchengetedza matombo emhangura akasungirirwa pafuremu kunze nekunze kwebhokisi, iro rinogona kusunganidzwa kune bhazi rekumisikidza mukati nekunze kwebhokisi zvakateerana. Mabhoroti epasi akasungirirwa kuseri kwemusuwo uye akabatana nefuremu newaya dzemhangura. Iyo yekuisa matanda mubhokisi uye furemu zvakabatanidzwa nemabhaudhi kuti ive nechokwadi chekumisikidza kuenderera kweiri rese rekugovera bhokisi.
5. Waya yekupinda uye nzira yekubuda
Iyo tambo kana pombi yekupinda uye yekubuda nzira inogamuchirwa, uye bhokisi rakagadzirwa necampamp yekugadzirisa tambo.
Pashure: MNS Yakavharwa Indoor Yakadzika Voltage Inodhonzwa switchgear
Zvadaro: DFW akateedzana 12kV Yakakwira Voltage Cable Yebhokisi Bhokisi
Distribution Bhokisi switchgear
Yakadzika Voltage Distribution switchgear
GGD Photovoltaic grid-yakabatana Indoor yakagadziriswa ty ...
GGJ yakaderera-voltage simba rekuparadzira rakashanda pow ...